The Irrawaddy's Blog: ကိုပါကြီးကိစ္စ ရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမရှေ့ဆန္ဒပြသူတွေကို အမှုဖွင့်ပြီ
Facebook RSS Feed Twitter
ကိုပါကြီးကိစ္စ ရန်ကုန်မြို့တော်ခမ်းမရှေ့ဆန္ဒပြသူတွေကို အမှုဖွင့်ပြီ
ပြီးခဲ့တဲ့ တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေပိုင်းက ကိုပါကြီး သေဆုံးမှု အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေးအတွက် ရန်ကုန်မြို့ မြို့တော် ခမ်းမ ရှေ့ ဆန္ဒပြပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ အမှုဖွင့်ပြီလို့ သိရပါတယ်။
ဓာတ်ပုံ- ဂျေပိုင်/ ဧရာဝတီ
အဲဒီဆန္ဒပြပွဲမှာ ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင် ဦးမင်းကိုနိုင်၊ ဦးကိုကိုကြီး၊ ဦးမြအေးတို့နဲ့အတူ တက်ကြွစွာ ပါဝင်ခဲ့သူ ကိုမိုဃ်းသွေးကို အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့ သတင်းကြားလို့ ကျောက်တံတား ရဲစခန်း စခန်းမှူး ဦးတင်လှကို ဖုန်းဆက်မေးမြန်းတာမှာ ဟုတ်မှန်ကြောင်း ရဲစခန်းမှူးက ပြောခဲ့တယ်လို့ ကိုမိုဃ်းသွေး က သူ့ဖေ့စ်ကနေ အသိပေးထား ပါတယ်။
“တနင်္ဂနွေနေ့ ညနေ ကိုပါကြီးကိစ္စဆန္ဒပြပွဲနဲ့ပတ်သက်လို့ ကျနော့်ကို အမှုဖွင့်ထားတယ်လို့ မိတ်ဆွေ သတင်းသမား တချို့က အကြောင်းကြားလာလို့ ကျောက်တံတားရဲစခန်းမှုး ဦးတင်လှ 09250636902 ကိုဖုန်းဆက်မေးခဲ့ပါတယ်။ သူက ဟုတ်မှန်ကြောင်းပြောဆိုတဲ့အတွက် ကျနော်က တရားဝင်စာနဲ့ လာရောက်ကြောင်းကြားဖို့ ပြောတဲ့အခါ 09253255730 မြို့နယ်မှူး စခန်းဖုန်းနံပါတ်ကို မေးမြန်း ပါလို့ လွှဲပေးပါတယ်။ အဲ့ဒီဖုန်းနံပါတ်က ခုထိဆက်သွယ်လို့ မရပါဘူး” လို့ ကိုမိုဃ်းသွေးက ရေးပါတယ်။
သူဆက်ရေးချက်အရ ကိုပါကြီး သေဆုံးမှု အမှုမှန်ပေါ်ပေါက်ရေး မြို့တော်ခမ်းမရှေ့ဆန္ဒပြမှုနဲ့ပတ်သက်ပြီး မိုဃ်းသွေး နဲ့အပေါင်းအများကို ပုဒ်မ (၁၈)နဲ့ အမှုအမှတ်(ပ)၃၄၃/၂၀၁၄ နဲ့ အမှုဖွင့်ထားပါတယ်တဲ့။
ဒါဆို ၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသားခေါင်းဆောင်တွေဖြစ်တဲ့ ရဲရဲတောက်မိန့်ခွန်းပြောခဲ့သူ ဦးကိုကိုကြီး၊ ဦးမင်းကိုနိုင် တို့ကို လည်း အမှုဖွင့်ထားတယ်ဆိုတဲ့သဘောပါ။
၈၈ မျိုးဆက်ကျောင်းသား ခေါင်းဆောင် ဦးမင်းကိုနိုင်၊ ဦးကိုကိုကြီးတို့ကို အမှုဖွင့်ထားမှု ရှိ၊ မရှိ အခုထိ အတိအကျ မသိရသေးပါဘူး။
ဧရာဝတီ Facebook / ဧရာဝတီ Twitter
Posted in: Eaint Than Zin , News , သတင်း
Unknown said... :
October 28, 2014 at 11:12 AM
ဧရာဝတီ ဘလော့ဂ် ဟာ ဧရာဝတီသတင်းဌာနရဲ့ ကိုယ်ပွားတခုပါ။ လှုပ်ရှားနေတဲ့ နိုင်ငံရေး၊ စီးပွားရေး၊ လူမှုရေး၊ အနုပညာသတင်း အချက်အလက်တွေကို ဧရာဝတီ သတင်းဌာနကတဆင့် ပရိသတ်များ ဖတ်ရှုရပြီး ဖြစ်နေမှာပါ။ ဒါပေမယ့် မြန်မာပြည် တဝန်းက ရပ်ကွက်တွေ၊ လမ်းတွေပေါ်မှာ ပြန့်ကျဲနေတဲ့ ရင်ဖွင့်သံတွေ၊ ပါးစပ်သတင်းတွေ၊ ဒေသတွင်းနဲ့ နိုင်ငံတကာက မြန်မာနိုင်ငံနဲ့ ဆက်စပ်တဲ့ သတင်းတွေကို ပရိသတ်တွေဆီ ပိုမိုပေးနိုင်ဖို့အတွက်နဲ့ ပရိသတ်ဆီက စကားတွေကို တိုက်ရိုက် ကြားနိုင်ဖို့ အတွက် ရည်ရွယ်ပြီး ဒီဘလော့ဂ်ကို ဖွင့်လှစ်ထားတာပါ။
ရုပ် / သံ
ကမ္ဘာ့အလှမယ်စင်မြင့်ဆီသို့ ပထမဆုံးရောက်ရှိလာတဲ့ ရခိုင်ရိုးရာအလှတရားများ
ဒါဟာ ရခိုင်တိုင်းရင်းသားတွေရဲ့ ရိုးရာအလှတရားကို ကမ္ဘာ့စင်မြင့်ထက်မှာ ပထမဆုံးအနေနဲ့ ကိုယ်စားပြုဖော်ထုတ်ပြမှာ လည်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဆက်လက်ဖတ်ရ...
NLD မဲဆွယ်ပွဲအတွက် ဟစ်ပ်ဟော့ပ် သီချင်း တပုဒ်
~ မြန်မာပြည် ဟစ်ပ်ဟော့ပ်ရေစီးကြောင်းရဲ့ ပထမမျိုးဆက်တွေဖြစ်တဲ့ ဇေယျာသော်၊ ရန်ရန်ချန်း နဲ့ အနဂ္ဂ တို့ မကြာသေးမီက ဒေါ်အောင်ဆန်းစုကြည်န...
ဂျပန်အပြာကားမင်းသမီး ၉ ဦးရဲ့ ပရဟိတအလှူ
~ အပြာကားမင်းသမီးတွေကို အပြာကားထဲမှာပဲ တွေ့ရမယ်လို့ ထင်ထားခဲ့ကြမှာပါ။ ဂျပန်က အပြာမင်းသမီး ၉ ဦးက AIDS ကာကွယ်တားဆီးရေးလုပ်င...
ကြံ့ဖွံ့ပါတီကို မဲပေးခဲ့တဲ့ လေးဖြူ
၂၀၁၀ မှာ ရော်ကာ လေးဖြူက ကြံ့ခိုင်ရေးပါတီကို အားပေးခဲ့တယ်လို့ ဆိုတယ်။ မတ် ၂၉ ရက်နေ့ထုတ် ENVOY ဂျာနယ် မှာ ဖော်ပြထားတာပါ။ "၂၀၁၀ ရွေးကေ...
သဇင် နဲ့ မိုးဟေကို အများဆုံး အရှာခံရ
~ သဇင် (ဓာတ်ပုံ - ရွှေအမြုတေ မဂ္ဂဇင်း http://shweamyutay.com ) သဇင် နဲ့ မိုးဟေကိုတို့ကို တွေ့ဖို့ ဧရာဝတီ ဘလော့ကို ရောက်လာသူ အင်မတန် မျာ...
Car IT Trends Youth ကျန်းမာရေး စားသောက်ဆိုင် ဓာတ်ပုံ ဖက်ရှင် နဲ့ အလှအပ ဗဟုသုတ ဘာသာပြန် သတင်း အင်တာဗျူး အစားအသောက် အနုပညာ ရပ်ဝန်း ထွေထွေရာရာ
The Irrawaddy Magazine
Copyright © 2014 Irrawaddy Publishing Group. All Rights Reserved